खुसी अरुले ल्याइदिने होइन, आफ्नो खुसी आफै खोज्ने हो ( पढनुहोस) – Khabar PatrikaNp
October 26, 2020 252
विश्व खुसी दिवस (२० मार्च) को अवसरमा वेस्टन सर्च इन्स्टिच्यूट अफ पोजेटिभ साइन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी डा. रामचन्द्र लामिछानेसँग रातोपाटीका सुनिता न्यौपानेले गरेको खुसी संवाद :
नेपाली समाजको एउटा समस्या के हो भने आफूलाई पनि सम्मान नगर्ने र अरुलाई पनि सम्मान नगर्ने । प्रत्येक व्यक्तिले के ठान्नुपर्याे भने प्रत्येक नागरिक राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री जत्तिकै महत्वपूर्ण हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई पनि घाम लाग्छ, सामान्य नागरिकलाई पनि घाम लाग्छ । दुवैलाई भोक लाग्छ । त्यसकारण कुनै पनि नागरिक कुनै पनि हालतमा देशको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति जत्तिकै सम्मानित हुन्छन् । पहिलो सूत्र के राम्रो छ भनेर हेर्न जान्नुपर्याै । मान्छे भावनामा चल्ने खालको हुन्छ ।
त्यसकारण आफ्नो भावनालाई ख्याल गर्न सक्नुपर्छ । आफ्नो भावनालाई सबैभन्दा पहिले सम्मान गर्नुपर्छ । त्यो भनेको आत्मसम्मान हो । त्यसपछि बल्ल हामी अरुलाई सम्मान गर्न सक्छौँ । नेपाली समाजको एउटा समस्या के हो भने आफूलाई पनि सम्मान नगर्ने र अरुलाई पनि सम्मान नगर्ने । प्रत्येक व्यक्तिले के ठान्नुपर्याे भने प्रत्येक नागरिक राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री जत्तिकै महत्वपूर्ण हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई पनि घाम लाग्छ, सामान्य नागरिकलाई पनि घाम लाग्छ । दुवैलाई भोक लाग्छ ।
त्यसकारण कुनै पनि नागरिक कुनै पनि हालतमा देशको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति जत्तिकै सम्मानित हुन्छन् । उहाँको पनि एक भोट हो, सामान्य नागरिकको पनि एक भोट हो । त्यसकारण हरेक नागरिकले आफूलाई त्यो ठाउँमा राखेर हेर्नुपर्याे । म यो देशको सम्मानित नागरिक हुँ । यदि सबैले सबैको सम्मान गर्न सक्यौं भने त्यो व्यक्तिले गैरकानूनी काम गर्दा दश पटक सोच्छ । के सम्मानित नागरिकले यस्तो काम गर्छ ? आफैले आफैलाई प्रश्न गर्न थाल्छ ।
आम नेपालीले खुसीको कारण बाहिर छ भन्ने ठानिरहेका छन् । राज्य व्यवस्थाले खुसी ल्याइदिन्छ कि भन्ने सोचिरहेका छन् । त्यस्तो हँुदैन । प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो खुसी आफैं खोज्ने हो । त्यो खुसी खोज्नको लागि सबैभन्दा पहिले आफूलाई सम्मान गर्ने– म केही हँु भनेर । मसँग पनि काम गर्न सक्ने शक्ति र क्षमता छ भनेर विश्वास गर्नुपर्छ ।
संसारको सबै मानिसमा मस्तिष्कको तीव्रता २६७ माइल प्रतिघण्टा हो । त्यो अमेरिकी युवामा पनि त्यही हो, नेपालीमा पनि त्यहि हो । त्यसकारण युवासँग जे जति स्रोत र साधन छन्, त्यो स्रोत र साधन भनेको मस्तिष्क हो, आफ्नो सम्मान र पहिचान हो । त्यो हामीसँग पनि छ । त्यो छ भनेर हामीले पहिचान गर्न सक्दैनौँ भने हामी खुसी हुँदैनौँ । अहिले हामीमा खुसीको कारण मभित्र छ र मेरो हो भन्ने हुनपर्छ ।
Prevअभिनेता पल शाहले सियोनाको लागि दशै दक्षिणा स्वरुप टिकाकै दिन १ लाख प्रदान
Nextबस है’ भन्दै मुस्कुराउँदै काममा निस्किएका श्रीमानको आयो यस्तो खबर, श्रीमती र बच्चाको भयो बिचल्ली [भिडियो हेर्नुहोस]
बास्तु शाश्त्र अनुसार घरको कुन दिशामा कुन बिरुवा रोप्ने ..? जान्नुहोस
विनोद चौधरी होम आइसोलेसनमै बसेर कोरोना संक्रमणबाट मुक्त !
तलब,रासनमा,शोषण र बढुवामा विभेद भन्दै पछिल्लो तीन वर्षमा सात हजार सात सय चार प्रहरीको राजीनामा
स्वास्नीको शरीर बलिया हुँदा मात्र लोग्ने भनेको आफ्नो हुने रहेछ
घरमा भ्यागुतो आयो भने के हुन्छ ? शुभ कि अशुभ… ?थाहा पाउनुहोस (31191)
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (30428)